China Outdoor propane fire pit Manufacture and Factory | Chuliuxang
Umgodi womlilo wepropane wangaphandle
Isakhelo sentsimbi esisigxina somlilo esiphathwayo sinombala omnyama ongamelana nobushushu. Ngokumelana nemozulu, umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo, ukuqina okuhlala ixesha elide kunye neempawu zokurusa.
Indibano elula yakha le yunithi ukuya kuma-28 x 28 x 24 intshi iyenza ibengubude obugqibeleleyo ukuqokelela abahlobo kunye nosapho malunga nokwamkela kwayo i-30,000 ye-BTU yokutshisa.
Guqula igadi yakho yangasemva okanye ipatio ibe yindawo yokuhlala yasebusuku kwangoko ngalo mgodi womlilo wepropane. Le ndawo yomlilo yentsimbi ekhangayo ekwazi ukumelana nemozulu ifaka i-mantel yesileyiti eyenziwe ngesandla kunye neepaneli zecala ezithungwe ezifihla i-20 lb. itanki yepropane (engabandakanyi). I-30,000 ye-BTU ye-pit enamandla ikhanyisa ngokutyhala ngokulula kwaye ijike i-ignition, kunye nokuphakama komlilo ohlengahlengiswayo ophakathi kwelitye le-rustic lava (elibandakanyiweyo).
Lo mlilo wensimbi ongenasici usebenzisa i-mantel yensimbi, idibaniswe nezinto zakudala zefenitshala ephezulu. Isiseko saso sokuhlobisa sifihla ngobuqili itanki yepropane (engabandakanyi) kunye nepaneli yokulawula, eyenza ibe yindawo ekhangayo yeendawo zokuhlala zangaphandle. Unokonwabela wonke umoya wesitovu seklasikhi ngaphandle kokukhathalela uthuthu. Ukongeza kobuhle, le yunithi ikwabandakanya i-lava, egxininisa kakuhle amadangatye ayo.
*Ibandakanya ilitye le-lava
*Ucango lufihla itanki kunye nephaneli yokulawula
*Ukutyhala ngokulula kwaye ujike umlilo
*Ubude bedangatye obuhlengahlengiswayo
Ngaphambili: I-Oven yeRotisserie eJikelezisa iBarbecue Grill
Okulandelayo: 30inch Steel Charcoal Fire Pit
igrill yegesi yangaphandle
umgodi womlilo ophathwayo
umgodi womlilo wepropane
Steel stainless BBQ gas grill
I-infrared 6 isitshisi segesi yebarbecue grills
2 Burner BBQ igesi grill
I-tabletop barbecue gas grill